Soomaaliya, 13 August 2019
Wareysiyo: Guddoomiyayaasha guddiyada doorashada Jubaland
Laba liis oo kala duwan oo xildhibaanno ah ayaa looga dhowaaqay magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubaland, ayada oo ay jiraan laba guddi oo doorasho oo kala duwan.
Jubaland oo looga dhowaaqay xildhibaanada laba baarlaman
Guddiga doorashooyinka Jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka Jubbaland, halka guddiga kale ee musharaxiinta mucaaradka ahna ay iyana ku dhowaaqeen xildhibaano.
Dad rayid ah oo lagu dilay Ceel Afweyn
Shan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay magaalada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag ka dib markii ay dablay hubaysani rasaas ku fureen meel kaalin shidaalka laga qaato ah.
Nin Kenyan ah oo lagu dilay Boosaaso
Nin ajnabi ah oo u dhashay dalka Kenya ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga.
Ganacsi Online ah oo laga hirgeliyey Boorama
Dhageyso Barnaamijyo ku saabsan Ciidul Adxa
Saaxibayaal, VOA Soomaali ayaa waxay idiin soo gudbineysaa laba barnaamij oo gaar ah oo ku saabsan munaasabadda Ciidul Adxaa.
Sidee maanta looga ciiday Geeska Africa?
Dalka Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ee Geeska Africa ayaa maanta si nabad ah looga dabaaldagay munaasabadda Ciidul Adxaa.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Danburey iyo Casha Cuud.